ဖခင် ဖြစ်သူ Ruder Finn အရာရှိချုပ် အဲဖရက်ဒို ပေါလ်စန် နှင့် မိခင် ဂျက်ကလင်းတို့မှ နယူယောက် မြို့ ရှိ ကွင်း အရပ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ပေါလ်စန် သည် သူမွေးဖွားရာ ကွင်း အရပ်ရှိ Whitestone Hebrew CentreaUnited Synagogue of Conservative Judaism school တွင်လည်း တတ်ရောက် ပညာသင်ခဲ့သည်။ သူသည် New York University’s College of Business and Public Administration ယခု NYU Stern School တွင် စီးပွားရေးပညာ ဘွဲ့finance degree ကို ထိပ်ဆုံးမှ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
Paulson & Co., Inc., သည် hedge funds တို့၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြစံပြ ကုမ်ပဏီ ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုတို့ကို လွယ်ကူစွာပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ Paulson ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှူ တန်ဖိုးမှာ ၂၀၀ရ ခုနှစ် ဇွန် ၁ ရက်နေ့စာရင်းအရ ဒေါ်လာ ဘီလျံပေါင်း ၁၂.၅ ၉၅%သည် အင်စတီကျူးရှင်းမှဖြစ်သည်။ ထို ပမာဏသည် ၂၀၀၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် ဒေါ်လာ ဘီလျံပေါင်း ၃၆ အထိရှိလာသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် သူသည် ကုမ္ပဏီ အတွက် ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလျံ အထိရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဦးဆောင်မှု အောက်တွင် Paulson & Coသည် အာမခံဈေးကွက် ရှိ the foreclosure and mortgage backed ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အရေးပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဝေါလ်စထရိပေါ်ရှိ ငွေကြေးအရင်းအနှီးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ လက်တလော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄၅ ဘီလျံ ကျော်ရင်းနှီး မြှပ်နှံထားပြီး ငွေကြေးများ မြုပ်နေ၍ ဖိစီးမှုများကြုံတွေ့နေရသည့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဘဏ်များကို ငွေချေးပေးခြင်း၊ အခြားသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လုပ်ငန်းငယ်လေးများအား ငွေချေးပေးနိုင်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ အစွဲ့အစည်းအသစ်ကို ထည်ထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပြဿနာအရင်းခံမှာ အိမ်ဈေးကွက်နှင့် ချိတ်နေသည့် အရင်းအနှီး Assets များမှာ မှန်းထားသည့်ထက်လျော့သော အကျိုးအမြတ်ကိုသာ ရရှိနေခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Paulson & Co., သည် Yahoo စတော့ ရှယ်ယာ ထံမှ ဒေါ်လာသန်း ၅ဝ ဖိုးခန့် ဝယ်ခဲ့သည်။ Yahoos board အတွက် proxy ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် Carl Icahn ကို အထောက်အပံ့ရရှိစေရန် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီသည် Federal Reserve ၏ ဥက်ကဌဟောင်းဖြစ်သူ Alan Greenspan ကို ငှားရမ်း ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာ တွင် ပေါ်လ်ဆန်သည် ဗြိတိန်ဘဏ်ကြီး ငါး ခု ရှိသည့်အနက် ဘဏ်ကြီး ၄ ခုနှင့် စီးပွားဖက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမှူ တန်ဖိုး စတာလင်ပေါင် သန်း ၃၅ဝ ကို ဘာကလေး၏ ရှယ်ယာတွင်လည်းကောင်း ၊ စတာလင်ပေါင် သန်း ၂၉၂ ကို စကော့တလန်ရှိ ရိုင်ရယ်ဘဏ် တွင်လည်းကောင်း ၊ စတာလင်ပေါင် သန်း ၂၆ဝ ကို Lloyds ဘဏ်တွင် လည်းကောင်း အသီးသီးထည့်ဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီ တွင် RBS ရှိ အနေအထားကို လျော့ချပြီးနောက် နောက်ဆုံးတွင် ၂၈ဝ မီလျံ ယူရိုနီးပါး အမြတ် ထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ် ဩဂုတ်တွင် သူသည် Goldman Sachs ၏ ရှယ်ယာထံမှ သန်း ၂၀ဝ ဖိုးခန့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Regions Financial ၏ ရှယ်ယာထံမှ လည်း ၃၅ သန်းဖိုး ဝယ်ယူခဲ့လေသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာထုတ် the New York Times ၏ ဖော်ပြချက်အရ သူသည် ၂၀၀ရခုနှစ် ငွေကြေးအကြပ်အတည်း ကာလတွင် synthetic collateralized debt obligations CDOs ငွေချေးစာချုပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အမြတ်အစွန်းများ လည်း ရရှိခဲ့သေးသည်။ ၂၀၁ဝ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့တွင် သူ၏ကုမ္ပဏီ ကို restructuring and recapitalization လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် publisher Houghton Mifflin Harcourt ဆိုသူက ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်၏ အဓိကအချက်များမှာ. အကြွေးဟောင်းပိုင်ရှင်များအား ပေါလ်ဆန်နှင့် သူ၏ကုမ္ပဏီ၊ Guggenheim အကျိုးတူစီးပွားဖက်များ နှင့် အခြားသူများအပါအဝင် ရှယ်ယာတန်ဖိုးအသစ်ကို ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အတူ ၅ ဘီလျံ ဒေါ်လာ အကြွေးမှ ၃ ဘီလျံ ဒေါ်လာသို့ လျှော့ချပေးခြင်း၊ ၂ ဘီလျံ အနိမ့်ဆုံးအကြွေး mezzanine debt ကို ရှယ်ယာတန်ဖိုးအဖြစ်နှင့် အာမခံတန်ဖိုးများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်၊ ရှယ်ယာတန်ဖိုးအသစ် ရောင်းချခြင်းမှ အသစ်ပေးချေငွေ ၆၅ဝ မီလျံ ဒေါ်လာတန် လက်ခံဖြတ်ပိုင်းရရှိရန် တို့ ဖြစ်သည်။ The Irish Times ၏ ဖော်ပြချက်အရ EMPG ၏ လက်ရှိ ရှယ်ယာ ပိုင်ရှင်များဖြစ်သော HMHs CEO Barry OCallaghan, စတော့ရှယ်ယာပွဲစား Davy Stockbrokers, Reed Elsevier နှင့် အခြား ပုဂ္ဂိုလ် တို့သည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးငွေ ဒေါ်လာဘီလျံပေါင်း ၃.၅ ခန့်ရှိသည်။
2. SEC v. Goldman Sachs
SEC မှ Goldman Sachs နှင့် Goldman ၏ ငွေချေးစာချုပ် အရောင်းအဝယ်လုပ်သူတယောက်ကို တရားစွဲဆိုသောအခါ တရားရုံးတွင် U.S. Securities and Exchange Commission မှ Paulson & Co. ကို ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုခဲ့သည်။ လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများကို လူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ပြရာတွင် အခြေခံအားဖြင့် အချက်အလက်များကို မှားယွင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ငွေချေးစာချုပ်အတုတခုဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့သည့်အချက်ကို ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ထိုစွပ်စွဲချက်မှာ Goldman Sachs မှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသို့ အောက်ပါအချက်ကို မှားယွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းကြောင့်စွပ်စွဲခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ မျှတသည့် ကြားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ACA Management မှ ပြုလုပ်သောအပေါင်စာချုပ်သည် ငွေချေးစာချုပ်များကို အခြေခံထားပြီး ထိုငွေချေးစာချုပ် များတွင် ပါဝင်သော Paulson & Co., နှင့်အတူ အကျိုးအမြတ်ရှိသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသို့ တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေသည့်အချက်ကို အပေါင်စာချုပ်များ၏ အဓိကအချက် အနေဖြင့် ထည့်သွင်းထားသည်ဟူ ၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။
ငွေကြေးပျက်ကွက်သည့် ကိစ္စရပ်တွင်ကြီးမားသော ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ရန် အလို့ငှါ Collateralized debt obligations CDOs တွေကို အပြန်အလှန် ထိန်းညှိုဖို့အတွက် Paulson & Co ကို ထားရှိခဲ့သည်။ Paulson သည် CDOs ၏ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စရပ်များ ကို ပြန်လည် ပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိ နိုင်မည့် အနေအထားသို့ရောက်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းကို တုံ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့် Paulson & Co မှ ယင်း ရှယ်ယာအား ရောင်းချပြီးသား သို့ မကြာမီတွင် ရောင်းချနိုင်ရန် တမင်တကာ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသည် ဟူ ၍ စွပ်စွဲခံရသည်။ Paulson & Co မှ ၎င်းကို ပြန်လည် ခုခံချေပခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ဒီဟာက ဘာကိုမှ မှားယွင်းပြီးဖော်ပြထားတာမဟုတ်လို့ တိုင်ကြားရမည့် အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ တရားစွဲဆိုရမည့်ကိစ္စလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ Paulson & Co ကပြောကြားခဲ့သည်။
3. အခြား အကြောင်းအရာများ
ဂျွန်ပေါလ်စန် သည် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာတော်ထိန်း U.S. Treasury Secretary ဖြစ်သူ Hank Paulson နှင့် Goldman Sachs ၏ အမှူဆောင် အရာရှိချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ တို့နှင့် ပတ်သက်မှု မရှိချေ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် သူသည် Wall Street Journal မှတဆင့် ဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုရစေရန်အတွက် Treasury Secretarys plan ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ၂၀၁ဝ ခုနှစ် သို့ရောက်သော် သူ၏ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု သည် ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံခန့်အထိ ရှိလာပြီး Forbes မဂ္ဂဇင်း၏ဖော်ပြချက်အရ ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး ၄၅ ယောက် မြောက် အဆင့်တွင် ရှိသည်။
သ တ န စ ဆအ င မ င မ က ထပ မ ရရ ခ သည ခ လ ဆ အမ သ အသင ကပ ပတ န ဟ င ဂ န တယ ရ သည ခ လ ဆ အမ သမ မ ဥက ကဌဖ စ သည အက ယ တဝင ဖ ပ ထ သ ဆ င ပ
ဘယ သန မ ပင ဖ စ သည အ ကစ သမ မ အန ဖ င မ က တ င စန ဂ န မက ကင ရ မ တ န န ဗ တ လ ဗ မ န န က ဆ လ စသ တ သည လည ဘယ သန မ ဖ စ က သည ကမ ဘ သမ င တ င
ဝလန တယ Matupi MMR004007022 Cangtak စန တပ Matupi MMR004007023 Lungpang လ ပန Matupi MMR004007024 Lingtui လ န တ Matupi MMR004007025 Raukthang ရ က ထန
အမည က အမ တ တရ အန ဖ င မ ည ခ ထ သ ပန ဖ စ ပ သ မသည ထ ပန အ တ န ဂ န ပ ဂ ရ သ မ ဥယ ဉ အတ င တ င စ က ပ ခ ခ င ဖ စ သည စင က ပ
ဇန စ - ပ ရန က န မ အ.ထ.က ဗ လ တစ ထ င ယ ခင စ န ပ လ က င သည ဘက စ ပည ရ က တ တက အ င မ င အ င က စ ဆ င ရ က န သ